Trooping the Color ကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Meghan နဲ့ Kate – FemaleWear.net
Trooping the Color ကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Meghan နဲ့ Kate
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ Trooping the Colour ကို အသစ်စက်စက် မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Meghan နဲ့ တော်ဝင်မိသားစုအားလုံးက တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Trooping the Colour ဆိုတာကတော့ ဗြိတိသျှတပ်ရင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ traditional ဖျော်ဖြေပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Meghan အနေနဲ့ ဒီပွဲဟာ တော်ဝင်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဒုတိယမြောက်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပွဲကတော့ Prince Charles ရဲ့ အသက် ၇၀ ပြည့်မွေးနေ့ပွဲပါ။
Trooping the Colour ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Meghan နဲ့ Kate တို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကတော့ ထုံစံအတိုင်းလူစိတ်ဝင်းစားခံရဆုံးနဲ့ သတိထားခံရဆုံး ဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ Meghan ကတော့ သူမရဲ့ပုံစံအတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး သူမတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကတော့ Duchess of Sussex ဆိုတဲ့အတိုင်း တော်ဝင်အလှတရားကိုယ်စီနဲ့ လှပနေကြပါတယ်။ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တော်ဝင်စည်းကမ်းအတိုင်း ဝတ်ခွင့်ပြုထားသော အရောင်၊ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်း ရိုးရိုးဆန်းဆန်းကို ဝတ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦးရဲ့ မတူညီတဲ့ အရောင် ကွဲပြားတဲ့ ချုပ်ပုံဒီဇိုင်းတွေနဲ့ တယောက်တမျိုးစီ တော်ဝင်အလှတရားပေါ်လွင်ပုံနေပုံကိုတော့ အောက်မှာတချက်ရှိုးလိုက်နော်။
The Duchess of Cornwall and The Duchess of Cambridge travel along the Mall to Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade #TroopingtheColour pic.twitter.com/Kh1A1xWa7P
The royal family gather on the balcony at Buckingham Palace to watch the RAF fly-past following the Trooping the Colour parade – more pictures via link in bio #troopingthecolour
A post shared by Harper's Bazaar UK (@bazaaruk) on Jun 9, 2018 at 6:28am PDT
La reine Elizabeth IIafêté ses 92 ans ce week-end lors de la grande cérémonie du #troopingthecolour ?? Très attendus, le prince Harry et Meghan Markle filent toujours le parfait amour ? ? @sipa.press #royalfamily #harryandmeghan #meghanmarkle #troopingthecolour #troopingthecolour2018 #love #mondaymood #picoftheday #outfitoftheday #happy #cute #beautiful #photooftheday #family #greatbritain
A post shared by ELLE (@ellefr) on Jun 11, 2018 at 1:07am PDT
Meghan Markle has made her Trooping the Colour debut wearing peach @carolinaherrera ?
A post shared by ELLE UK (@elleuk) on Jun 9, 2018 at 3:21am PDT
Tags: Celebrity, Prince Harry and Meghan Markle
Converse နဲ့ collab လုပ်လိုက်တဲ့ Miley Cyrus